Kalon’ny fahiny sy ny omaly : hanolotra seho any Toamasina R’Imbosa sy i Kolibera | NewsMada
Kalon’ny fahiny sy ny omaly : hanolotra seho any Toamasina R’Imbosa sy i Kolibera
Tafiditra ao anatin’ny fampivelarana ny kalon’Imerina sy ny kalon’ny omaly, hanatontosa seho ivelan’Antananarivo ny tarika R’Imbosa sy i Kolibera. Hitodi-doha any an-dRenivohitry Betsimisaraka.
Tarika R’Imbosa ahitana an’i Vavah, Tojo, Mimi, Lidy, Geba ary Mbosa miaraka amin’i gitara bagasin’i Kolibera. Ireo no hanafana ny efitrano malalaky ny La Famille Salazamay Toamasina ny 31 marsa izao manomboka amin’ny 7 ora sy sasany hariva. Fizarana voalohany, hira tranainy ahenoana ny kalon’ny fahiny toy ny sanganasan-dry Naka Rabemanantsoa, Ratianarivo, Rajoro, Rasamy Gitara, sns. Kalon’ny omaly, hikaloan’ny tarika R’Imbosa sy i Kolibera ny hiran-dry Naly Rakotofiringa, Barijaona, JJ Tseheno, Ranaivo Ranarivelo…
Raha ny nambaran’i Mbosa omaly, afaka mandray anjara ihany koa ireo olona te hanao izany amin’ny fotoana hidirana ao anatin’ny « cabaret ». « Afaka mihira irery izy ireo, afaka mihira miaraka amin’ny tarika R’Imbosa sy i Kolibera ihany koa », hoy izy. Ankoatra ireo, « hitondra voandalana azo jifain’ny mpankafy zavakanto ihany koa izahay amin’io fotoana io. Anisan’ireny ny rakikira 4, Cd mirakitra feona piano ranoiray, boky Tiona bagasy, Tononkalo Barijaona… », hoy hatrany i Mbosa.
Tsilian-tsofina omaly ihany koa no nahafantarana fa hisy seho lehibe hotontosain’ny Angolan’Imerina sy R’Imbosa miaraka amin’i Kolibera ny voalohandohan’ny volana avrily izao, eto an-dRenivohitra. Hasongadina manokana amin’izany ireo hira nokaloin’i Barijaona sy ireo noforonin’i Ranaivo Ranarivelo.